Obere ụgbọala ụgbọ ala Odisha | Ọtụtụ narị ụgbọ epeepe
Ụgbọ ala ndị mgbazinye bụ ngọzi nke ụbọchị ahụ dịka anyị nwere ike iji ha mee mgbanwe dị ukwuu na nnwere onwe nke ije dịka ụgbọala anyị. Ezumike na ntụrụndụ bụ ọrụ dị mkpa nye ndị chọrọ ịmụta na ọganihu ma ọ bụrụ na ha anọgide na-ahụ ike. Ntugharị bụ ebe kasị mma isi mụta ihe n'oge ntụrụndụ; karịsịa maka ndị na-eto eto anyị, mana ọ ga-abụrịrị na ọ dị mfe n'ọnọdụ Odisha, ọ bụrụ na Car Coach Rentals Odisha agaghị anọ ebe ahụ.
Sand Pebbles Tours bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka mpaghara inye ndị na-azụ ụgbọ ala Odisha. Anyị na-ejide n'aka na a na-ejikwa nlekọta dị ukwuu na nlezianya na-elekọta ndị njem niile. Ahụmahụ gị na anyị ga-eme ka ị chọkwuo ka ọ bụrụ na anyị na-enye ụgbọ ala na ụgbọ oloko na Odisha. Anyị nwere nnukwu ụgbọ oloko dị iche iche na ọrụ gị iji dozie Odisha dị ike na nke siri ike. Ụgbọala anyị zuru oke na ihe niile dị mkpa na-eme ka ahụ dị gị mma. Ị ghaghị ichegbu onwe gị ma ọ bụ naanị gị ma ọ bụ ndị otu enyi, ma ọ bụ nnukwu ìgwè ma ọ bụ obere ìgwè, na ihe ọ bụla ikpe nwere ike ịbụ na anyị nwere ụgbọala kachasị mma nke nwere ike ịkwado akpa gị na uto ya.
A kọwaara Car Coach Rentals Odisha n'okpuru: -
Azụmahịa nke AC Na-emepụta Ụgbọ ala na Nchịkọta
Ụgbọ ala: Mercedes Benz, BMW, Fortuner, Corolla Altis, Honda City, Honda BRV na otu.
Nlekọta: 13, 19, 27, 41 & 45 oche oche mara mma.
Ụgbọ ala bụ ihe na-erughị afọ atọ ma nwee ngwaọrụ nchekwa / Belts, Akpa Enyemaka, Mmiri Nchịkwa, na ihe ndị ọzọ dị mkpa.
Ọrụ dị na 24 Hrs / 7 ụbọchị n'izu
Ndị ọkwọ ụgbọala na-akụzi ihe, nwee ahụmahụ nke ọma & nwee ekwe ntị maka ijiko.
Sand Pebbles bụ onye na-arụ ọrụ ụgbọ njem nke ọtụtụ ụlọ ọrụ na National na Multi-National ụlọ ọrụ.
jụọ anyị / Kpọtụrụ anyị